"विप्ल्याँटे" जिन्दगी विवरण - | Kavyalaya - काव्यालय
by sriju साउन २५, २०७६
रातमा पढ्नुस् या दिनमा पढ्नुस् । यो लेखिरहँदा यहाँ भने रात नै परिरहेको कुराको साक्षी मध्यरातको चन्द्रमा छ । खैर, यहाँ रातको अदा खुब मनमोहक पोखिइरहेको छ । खुला झ्यालबाट झरी रुप की परीले आफ्नो पाउजुको झंकार पठाएर यो रात्री वातावरणलाई अझै मनोरम बनाइरहेकी छे । साच्चै, झरीलाई मैले परी किन भनेँ ? झरी स्त्री नै हुनसक्छे भन्ने यकिन नै के छ र ? म भित्रकी एउटी फेमिनिस्ट मलाई झम्टिन्छे – “झरीलाई परी भन्नु अनि रात्री महेफिलमा नचाउनु, मनोरञ्जनको माध्यम कल्पिनु ! यो नारीमाथिको सस्तो विचार हो ! सस्तो सोच !” उफ् ! मेरो सातो जान्छ । तर म भित्र सायद अर्कि फेमिनिस्ट पनि छे, सुरुकीले भन्दा बिल्कुल विप्ल्याँटो विचार राख्छे – “आहा ! झरीलाई परीसँग दाँज्नु, संगीतसँग दाँज्नु, नृत्य, कला, मनोरञ्जनसँग दाँज्नु ! मनसँग दाँज्नु, रञ्जना, प्रफुल्लता, खुशी, आनन्दसँग दाँज्नु ! साच्चै, नारीविना संसार उदेकलाग्दो छ । नारी नै उमंग र उत्साह कि उद्गम हो ।” मेरो सातो फर्किन्छ । दबेको श्वास पुनः गतिमा फर्किन्छ । जीवन फर्किन्छ ।
वास्तवमा यसरी जिउनु पो जिउनु । श्वास नदबाई, सपना नदबाई । सपना ? के सपनामा जिउनु वास्तविक जिउनु हो ? सपनामा जिउनु होइन बरु सपना जिउनु चाहिँ वास्तविक जिउनु हो । उफ् ! फेरि के भन्छे यो मभित्र की म ? सपना जिउनु रे । सपना जिउन थाले, सपना, सपना नै रहन्न नि । जिएपछि त विपना भइगयो नि ! होइन र, विपना नै जीवन होइन ?
Flights in Dream and Reality by Ivan Onlillinen
विपना त अहिले हामीले बाँचिरहेछौँ, भोगिरहेछौँ । के यही हो त जीवन ? नाइँ नाइँ यो हुनै सक्दैन । यो जीवन हुँदै होइन । वास्तविक जिउनु यो हुँदै होइन । यसरी जिउनुसँग म खुश छँदै छैन । यसमा मेरो मन सम्मिलित छैन, आत्मा समर्पित छैन । त्यसैले यो जीवन होइन । तर फेरि, विपना त हो त यो, होइन ? भनेपछि विपना बराबर जीवन भन्नु गलत रहेछ त ? त्यसोभए सपना बराबर जीवन हुन पनि त सक्ने भो । सपना साचो र विपना झुठो हुन सक्ने भो । वास्तवमा म जे हुँ त्यो नहुन पनि सक्छु । जे हुँइन त्यो हुन पनि सक्छु । होइन, यो के चलिरहेको छ ? आफैभित्र पनि दुईथरी म ? दुईथरी विचार ? दुईथरी जिन्दगी ? त्यो पनि एक- अर्काका विरोधी ! विप्ल्याँटा ! उसका लागि ऊ विप्ल्याँटो, उसका लागि ऊ । हाहाहा, विप्ल्याँटे जिन्दगी ! आफैसँग विरोधाभास गर्दै बाँचिरहेको जिन्दगी !
झरी रोकिएको छ । वातावरण शान्त छ, एकान्त छ। तर होइन। भनिहालेँ नि, जिन्दगी बडो विप्ल्याँटे छ । बाहिर पो शान्त छ, एकान्त छ वातावरण। भित्र त होहल्ला छ, कल्याङमल्याङ छ । म एक्ली पनि छैन बरु थुप्रै ‘म’ हरु छन् ।
सधैँ सोच्छु –‘राति चाँडै सुत्छु र बिहान चाँडै उठ्छु।’ तर गर्छु के ? यी: देखिहाल्नु भो, यस्तै लेख्दै बस्छु । बिहानभरीको घुराइ पनि अब कल्पना गरिहाल्नुस् । सोचाइ र गराइ कति विपरीत छन्, छैनन् ? तर नसोच्नुस् है, हरेक रात यसैगरी लेख्दिरहिछ भनेर । धेरै रात त यसै बिताइरहेको हुन्छु । खाली सोचेर मात्रै । खाली होइन क्यारे ! भरी-भरी ! इच्छा, सपनाहरुले भरी-भरी सोचाइहरु ! खँदिला सोचाइहरु सोचेरै बित्छन् प्राय रात ।
तर हिजोको रात ? अहो ! धन्न कोठासँगै जोडिएको छ ट्वाइलेट ! कब्जियतको बिराम हेर्नुस्, आउला जस्तो हुन्छ, जान्छु, आउँदैन, फर्किन्छु, फेरि आउला झैँ भइहाल्ने ! रातभरीको ओहोरदोहोर ! रुम टु ट्वाइलेट ! ट्वाइलेट टु रुम ! कतिपटक कान समाइसकेँ, अब त चिल्लो, पिरो, मसालेदार खान्नँ भनेर। तर आजै मात्र … कुरो गरेर फाइदा छैन । पानी धेरै पिउँछु भनेर अस्ति मात्रै १ लिटरको मिनेरल वाटर बोटलमा पानी भरेर बेड छेउ नै राखेको ! आज ३ दिन ३ रात भइसक्यो तर ३ इन्च घटाउन सकेको होइन । सोचाइ र गराइ बिचको खाडल यहाँपनि ! ल हेर्नुस् त, जिन्दगी कति साह्रै विप्ल्याँटे ?
कति आफ्नै मात्र कुरो गर्नु है? मेरो मेरो सोचेर को नै उँभो लागेको छ र ? बरु होलसेलमा कुरा गरौँ न, सबैको कुरा गरौँ । अँ त, साउनको महिना, हरिया चुरा लगाउँछु भन्दाभन्दै नलगाउने र लगाउदिनँ भन्ने हठ गर्दागर्दै पनि फेरि लगाई छोड्ने को-को हुनुहुन्छ ? वा क-कसका प्रेमिकाहरु हुनुहुन्छ ? कोही त पक्कै हुनुहुन्छ होला नि है ?
अनि, अस्तिदेखि फेसबुकको ब्ल्कलिस्टमा गजक्क परेर बसिरहेको त्यो एउटा नाम, मेटाउँछु भन्दाभन्दै नमेटाइरहनु भएको त छैन ? कति मैले मात्र बोलाउनु ? सधैँ मै बाट हुनुपर्छ र सुरुवात ? कहिलेकाहीँ उसले बोलाउँदा पनि त हुन्छ । उताबाट म्यासेज नआई आज त म पनि बोलाउँदै बोलाउँदिनँ । यस्तो आफ्नै वचन आफैसँग क-कसले कतिपटक तोड्नु भएको छ ?
यो पालीको खर्च त बडो कन्ट्रोलले चलाएर बरु थोरबहुत बचाएर बुवा-आमालाई घर पठाइदिने हो ! तलब आएको भोलिपल्टै यस्तो सपना पनि तुहिएको थाहा पाउँदा सन्नाटा छाएको पलहरु ! छन् कि छैनन् तपाईंका ? सापटी भनेर लगेको पैसा अझै फिर्ता दिएको छैन, कति महिना कुर्नु ? आज त जसरी नि माग्छु भनेर इन्बक्स मा हेल्लो लेख्नु र हालखबर सोधेर केही छैन बिस्तारै दिए हुन्छ नि भन्दै कुरो टुङ्ग्याउनु । यो त सबैको साझा अनुभव जस्तो लाग्छ मलाई ।
रुम पार्टनर रे ! खाना मिलेर पकाउँ भन्यो, सधैँ मै हुन्छु पकाउने बेला । सागसब्जी, तेल-मसला पनि त प्राय आफैले ल्याइराखेको हुन्छु । फेरिपनि तलब आएको पैसा चाहिँ के गर्ने रै’छ र जहिल्यै भाडा तिर्नेबेला यस्तै अनकन गर्छ यो मान्छे ? एक्लैले सबतिर धान्नु परे त सँगै बसेको के अर्थ ? अर्को पटक नि यस्तै गर्यो भने त छुट्टै रुम खोज भन्दिन्छु, कसरी सक्ने यार यसरी सधैँ ? तपाईंले यस्तो सोचेको त ६ महिना अगाडि होइन र ? अझैपनि उसैसँग उस्तै गरी बसिराख्नु भएको छ त ! सहानुभूति कि सम्झौता ? रिसाउला भन्ने डर कि कहाँ जाला भन्ने स्नेह ?
Partner by V. Samarin
अब किताब त, साच्चै भन्दै छु, कसैलाई दिन्नँ म ! मागेर नि पढ्छन् यार ? फेरि लगेर फिर्ता दिए त हुने नि, पचाइदिन्छन् के भन्नु ? अँह, अब त जसले मागोस् सिधै आफै किनेर पढ भन्दिन्छु, वचनै भो ल आफैसँग ! यो प्रण नि ? पूरा गर्नु भो त ?
Source: Flipboard (Art in London for Book Lovers)
यी वाचा कसमका कुरा पनि…. !
अब त कस्सम ! धोका दिन्नँ यार ! उसको पछाडि नि दिन्नँ । प्रेम र आकर्षणको फरक त आखिर मलाई पनि त थाहा छ । उसले मलाई गर्ने माया नबुझेको त कहाँ हो र ? त्यस्तो माया गर्ने मान्छेलाई, भो, अब त धरोधर्म दायाँबायाँ गरेर मन दुखाउने कुनै काम गर्दिनँ । कतिपटक तोड्नुभयो यस्ता कसमहरु ? अब पनि तोड्ने ? के कसम तोड्नकै लागि जोड्नुभएको हो त सम्बन्ध ?
आजपनि खोल्न बिर्सिनु भो नयाँ सेविङ अकाउन्ट ? जिन्दगीप्रति गम्भीर हुनुहुन्न र ? अझै जिम्मेवारी बोध नभएको त होइन होला, फेरि किन लापरवाह भइरहनु भएको छ यसरी ? हुन त मच्छडको ओखती त ल्याउँछु ल्याउँछु भन्दाभन्दै गर्मी महिना जान लागिसक्यो क्यारे, होइन ? के गर्ने, सोच्न त जिम्मेवार हुन्छु सोचिन्छ नि है ? तर के ले रोक्ने रोक्ने… यस्तै हो सबैको । सोचे जस्तो हुन्न जीवन.. गीत नै छ नि ! हाहाहा
के सोच्दै हुनुहुन्छ ? मुख किन अँध्यारो ? फेरि कसैले चलाइदियो ?
उफ् ! तपाईं पनि ! अनि अस्ति, अब त ध्यान गर्न थाल्छु, झनक्क रिसाउने, जरक्क जर्किने बानी जसरी नि कन्ट्रोल गर्नु छ भन्नुहुन्थ्यो होइन ? बिहान बिहान आफ्नो लागि ३० मिनेट समय निकाल्न के को आपत्ति भएको त अनि तपाईंलाई ? गर्छु भनेको काम गरिहाल्नुस् के । अनि अरु के छ नि ? यसपाली आएको पैसाले त तिरिदिनु भयो होला त त्यति चुस्स बाँकी? लौ? हो र, अझै बाँकी नै रह्यो? हुन त हो है, कता-कता चाहिँ पुर्याउनु? खान्छु, पचाउँछु त कसले सोचेको हुन्छ र, होइन ?
Yoga Pyramid by Charles Baughman
छोड्नुस् यो दुखी कुरा कति गरिबस्नु ! बरु भन्नुस् तपाईंको चुरोट रक्सी छोड्ने मिसन के हुँदैछ ? हाहाहा, हो र ? लागेको बानी छुटाउन के साह्रो गाह्रो, होइन ? त्यस्तै हो, त्यस्तै हो । मेरो पनि त शाकाहारी मिसन त्यस्तै त भइरहेको छ । मैले नखाँदैमा खान के रोकिन्थ्यो जस्तो लाग्छ, खाइदिन्छु । फेरि कमसेकम मैले नखाँदा कम त हुन्छ नि जस्तो लागेर अनि चुकचुकाउँछु पनि । सकिरहेकै छैन छोड्न । दोधारमै बितिरहेछ सब समय यसैगरी ।
‘Dual Diagnosis’ Illustration by Ken Orvidas
सबैको पालो आएपछि तपाईंको पनि पालो त आइहाल्छ नि ।
गायक बन्ने सपना बोकेर यो के पढिरहनु भएको छ ? यो सकुँला अनि त्यो गरुँला भन्नुभएको त तपाईंले उहिले १२ को परिक्षा दिँदै गर्दा देखि नै हो । अहिले यो के रट्ने विद्या पढ्न थाल्नु भयो ।
ए, यो सकेपछि चाहिँ जाने नै हो ललितकला ? भनेपछि सपना चाहिँ मरिसकेको रहेनछ । ल ल, सपना पूरा होस् है त !
Source- Pinterest “Dreams and Reality Contrast”
तपाईं चाहिँ किन हाँसिरहनु भएको छ ? तपाईं पनि त उस्तै हो । रुचिको विषय पढेँ मात्र भनेर हुन्छ र ? तपाईं त झन् भन्ने एकथोक, गर्ने अर्कैथोक ! व्यापार/व्यवसाय वा संस्था जे गरेपनि आफ्नै गर्छु, आफ्नै देशमा गर्छु भन्नुहुन्थ्यो । खै त ? अझै नि नोकरीमै चित्त बुझाइरहनु भएको छ । अरुको अधिनमा त कामै गर्न सक्दिनँ भन्नुहुन्थ्यो होइन र ? अझ अस्ति त कोसँग विदेशै हानिने कुरो गर्नुहुन्थ्यो रे ! हुन त हो नि । बुझ्छु, बुझ्छु । तपाईंको दोष त के छ र यसमा ? स्थिति/परिस्थितिकै हो नि । चाहेर रहरले विदेशीने त को नै हुन्छन् र ? भनिहालेँ नि सुरुमै, यो जिन्दगी नै विप्ल्याँटे छ/हुन्छ भनेर । जिन्दगी यस्तै हो दोधारे हुन्छ, विप्ल्याँटे हुन्छ । बाँचिरहेको जिन्दगी आफ्नो कि बाँच्न भनी साँचीरहेको जिन्दगी आफ्नो ? सपना कि विपना हो आफ्नो वास्तविक जिन्दगी? जे होस् जिन्दगी कुन हो, बुझ्न नसकिरहे पनि जिन्दगी को विवरण भने यही नै हो । तपाईं-हाम्रो विप्ल्याँटे जिन्दगीको विवरण यो ।
भर्सेस भर्सनमा बाँचिरहेको जिन्दगीको विवरण ! आफै-आफैमा विरोधाभास गर्दै बाँचिरहेको (कि मरिरहेको?) हाम्रो विप्ल्याँटे जिन्दगीको विवरण ! सुत्ने-उठ्ने, खाने-लाउने देखि कुन बाटोमा हिँड्ने, कुन गन्तव्य पुग्ने, कुन शैलीमा जिउने, कुन तरिकाले बाँच्ने ! कदम-कदममा, पल-पलमा विरोधाभास संगाल्दै बाँच्दै/मर्दै गरेको यो जिन्दगी थाहाछैन कस्तो छ, कस्तो देखिन्छ? सुल्टो या उल्टो ! तर लाग्न थालेको छ, जिन्दगीकै आँखाबाट हेर्दा भने जिन्दगीको हुलिया विप्ल्याँटो नै देखिनेरहेछ, जस्तो देखिन्छ आफैले आफैलाई हेर्न खोज्दा ऐनाभित्र सधैँ आफ्नो विप्ल्याँटे अनुहार !
पुनश्चः विपरित ‌‍‍+ बिब्ल्याँटे ‍= विप्ल्याँटे